China Kutsiva ROKU Wi-Fi izwi kure kudzora Kugadzira uye Fekitori | Yangkai
Kutsiva ROKU Wi-Fi izwi kure kure
Kodhi Yechigadzirwa: YKR-059
Inotsiva ROKU bhuruu-zino izwi kure kudzora.
Suit ye Roku Express, Roku Kutenderera Tambo, Roku Premiere, Roku Ultra, Roku 2, Roku 3 y Roku 4.
Yekutanga kuremhando. Imwe kune Mumwe.
Yakakwana kubata kunzwa.
ROKU kure kudzora:
Batanidza TO WI-FI
Zvichipa yako Roku chishandiso chakabatana nesimba uye chinoiswa simba pauri, iwe unozotungamirwa kuburikidza neyakagadziriswa maitiro. Zvakare, iwe unozodikanwa kuti ubatanidze tsvimbo kana bhokisi kune internet.
Kugadzirira Roku mabhokisi / MaTV, iwe uchafanirwa kusarudza Wired kana Wireless kuti ubatanidze kune router uye internet
Iyo wired sarudzo haizoonekwe yeRoku Streaming Sticks.
Kana iwe ukasarudza Wired, ndapota yeuka kubatanidza yako Roku bhokisi kana TV kune yako router uchishandisa Ethernet tambo. Iyo Roku chishandiso ichabatana zvakananga kunetiweki yako yekumba uye internet. Mushure mekusimbiswa, unogona kuenderera nematanho akasara ekumisikidza eRoku chishandiso. Kana ukasarudza Wiresi, mamwe matanho anodiwa kuti upedze nzira yekubatanidza usati waenderera kune mamwe ese eRoku matanho ekumisikidza matanho.
Kana iri kekutanga nguva yekubatanidza isina waya yekumisikidza, iyo Roku chishandiso inozongo tarisa kune chero anowanikwa network mukati mehurefu.
Kana iwo maratidziro aripo enetwork achioneka, sarudza yako isina waya network kubva pane iyo chinyorwa
Kana iwe usingakwanise kuwana yako network yepamusha, sarudza Scan zvakare kusvikira yaonekwa pane inotevera rondedzero.
Kana ikakundikana kuwana network yako, iyo Roku uye router inogona kunge iri kure kure. Kana iwe uchikwanisa kubatanidza kune yako router uchishandisa imwe mambure, ndiyo imwe yemhinduro. Chechipiri mhinduro ndeye kufambisa iyo Roku mudziyo uye router padhuze pamwe kana kuwedzera isina waya renji extender.
Paunenge iwe wafunga yako network, ichaongorora kana iyo Wi-Fi uye internet kubatana kuri kushanda nemazvo. Kana hongu, saka unogona kuenderera. Kana zvisiri, iwe unofanirwa kutarisa kana wakasarudza iyo chaiyo network.
Kamwe Roku yakabatana kunetiweki yako, iwe unofanirwa kuisa iyo network network. Wobva wasarudza Batanidza. Kana iro password rakapinda nemazvo, iwe uchaona yekusimbisa inotaura kuti Roku chishandiso chakabatana kune yako yekumba network uye neinternet.
Kana yangobatana, chishandiso cheRoku chinobva chango tsvaga chero iripo firmware / software inogadziridza. Kana paine chero akawanikwa, anozotora nekuaisa.
Ndokumbira utarise kuti chishandiso cheRoku chingangoda kutangazve / kutangazve panopera software / firmware yekuvandudza maitiro.
Mira kusvikira izvi zvapera. Ipapo, iwe unogona kuenderera mberi kune mamwe ekumisikidza matanho kana kuona.
Unganidza Roku kuWi-Fi Mushure mekutanga-Nguva Setup
Kana iwe uchifunga kubatanidza iyo Roku kune nyowani netiweki yeWi-Fi, kana kushandura kubva kune Wired kuenda kune Wireless network, ndapota ona matanho ekurova ekuita.
1. Dhinda iyo Kumba bhatani pane chako kure kure.
2. Sarudza Zvirongwa > Network mune iyo Roku onscreen menyu.
3. Sarudza Set Up Kubatana (sezvambotaurwa kare).
4. Sarudza Wireless (kana ese ari mairi Wired uye Wireless sarudzo dziripo).
5.Roku inotora nguva kuwana yako network.
6.Pinda yako network network uye mirira kubvumidzwa kwekubatanidza.
Unganidza Roku kuWi-Fi muDorm kana Hotera
Roku ine chinhu chakanakisa chaunogona kufamba netsvimbo yako yekushambadzira kana bhokisi uye woishandisa muHotera kana dorm kamuri.
Usati warongedza Roku yako kuti ishandiswe kune imwe nzvimbo, ita shuwa kuti nzvimbo yacho inopa Wi-Fi uye iyo TV yaunenge uchishandisa ine inowanikwa HDMI yekubatanidza iwe yaunogona kuwana kubva kuTV kure kure.
Iwe ungangoda yako Roku Akaunti log-in ruzivo, ndapota gadzirira pamberi.
Paunenge wagadzirira kushandisa iyo Roku, tevera pazasi matanho:
1.Get nzvimbo yacho samambure pasiwedhi.
2.Connect Roku tsvimbo yako kana bhokisi kuti simba uye TV unofanira kushandisa.
3.Dzvanya bhatani repamba pane Roku kure.
4.Go kuna Settings> Network> Set Up Connection.
Ndokumbira usarudze Wireless.
Kana network yakabatana yatanga, ndapota sarudza ndiri muhotera kana kukoreji dorm.Zvikurudziro zvinoverengeka zvichaonekwa paTV skrini kuti ive yechokwadi, semuenzaniso, kupinda muWi-Fi password. maficha ako eRoku zvigadzirwa uye zvaunofarira kutenderera zvemukati.
ABS / Nyowani ABS / yakajeka PC
Isina mvura / Wi-Fi
Roku Express, Roku Kutenderera Tambo,
Roku Premiere, Roku Ultra, Roku 2, Roku 3 uye Roku 4
ROKU / Yakagadzirirwa
Pcb + Rubber + Plastiki + Shell + Chitubu + LED + IC + Resistance + Capacitance
Zvadaro: Yese Remote Kudzora (4 mu1)
SONY Kutsiva Bhuruu-zino Izwi Remote Contr ...
LG Kutsiva IR Remote AKB75095308 AKB7371560 ...
SONY Kutsiva IR Remote Kudzora RMT-TX100D R ...
LG Kudzosera IR Kudzora Remote AKB74115502
Kutsiva Vodafone IR kure kudzora